COVID-19: Faa’iidooyinka tallaalka AstraZeneca weli ‘badanaa waa wanaagsan yihiin’ - Wardeeq 24 TV COVID-19: Faa’iidooyinka tallaalka AstraZeneca weli ‘badanaa waa wanaagsan yihiin’ Wardeeq 24 TV
Home Xulashada COVID-19: Faa'iidooyinka tallaalka AstraZeneca weli 'badanaa waa wanaagsan yihiin'
COVID-19: Faa’iidooyinka tallaalka AstraZeneca weli ‘badanaa waa wanaagsan yihiin’
Dr Rogério Pinto de Sá Gaspar, Agaasimaha Regulation and Prequalification, ayaa ka jawaabayay su’aal suxuufi ah oo la xiriirtay xiriirka ka dhexeeya talaalka iyo xididdada dhiigga maskaxda ku dhaca, cudurka dhiiga xinjirowga dhifka ah.
Wakaaladda dawooyinka Yurub (EMA) ayaa Talaadadii beenisay inay sameysay xiriir, kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in mid ka mid ah khubaradiisa uu sheegay inuu jiro xiriir.
Kulamo khubaro ah ayaa socda
Dhanka kale, guddi ka socda EMA oo kormeera badbaadada daawooyinka ayaa shiray si ay u qiimeeyaan xogta, taas oo sidoo kale ay dib u eegis ku sameynayaan hay’ad maamusha dalka Ingiriiska. WHO ayaa la socota labada dacwadood.
– Waxa aan dhihi karno waa qiimeynta aan hada heysano, tanina ay tixgalinayaan khubarada, waa in qiimeynta halista ee talaalka ay wali tahay mid inta badan wanaagsan, ayuu yiri Dr Pinto de Sá Gaspar.
Wuxuu sheegay in “dhacdooyinka dhiig-baxa” ay yihiin kuwo dhif ah, haddana waxaa loo kala saaraa marka loo eego sida ay dadka ugu dhex nool yihiin.
“Waqtigaan la joogo, ma jirto wax caddayn ah in qiimeynta halista waxtarka ee tallaalka ay u baahan tahay in wax laga beddelo”, ayuu raaciyay. “Waan ognahay xogta ka imaaneysa wadamada sida UK iyo kuwa kale, in faa iidooyinka ay runtii muhiim yihiin marka la eego yareynta dhimashada dadka la tallaalayo.”
Guddiga La-talinta Caalamiga ah ee WHO ee Badbaadinta Tallaalka ayaa la kulmi doonaa Arbacada, oo waliba fiirin doona xogta, iyada oo gabagabo la filayo dhammaadka wiigga.
Cuqdada iyo noocyada virus-ka
WHO waxay sii waddaa inay la shaqeyso koox saynisyahano ah oo adduunka ah si ay u soo saarto magac u yaal noocyada coronavirus-ka cusub ee sababa COVID-19.
Dad badan, oo ay ku jiraan khubarada caafimaadka, ayaa tixraacayay noocyada kala duwan ee waddammadii markii ugu horreysay laga helay, wax ay hay’adda Qaramada Midoobay rabto inay beddesho.
“Waxaan u baahanahay inaan hubino in magacyada la isticmaalay midkoodna uusan sii xumeyn qof, ama magac dambe, ama goob, si kama ‘ah”, ayay tiri Dr Maria Van Kerhove, oo ah madaxa farsamada WHO ee COVID-19, iyadoo ka jawaabeysa a su’aal uu weydiiyay wariye u dhashay Koonfur Afrika.
Waa inaanay jirin cuqdad la xiriirta fayrasyadan la ogaadey, nasiib darose wali waan aragnaa taas oo dhaceysa. ”
Xilligan waxaa jira saddex nooc: B117, oo markii ugu horreysay laga aqoonsaday Ingiriiska; B 1.351, oo markii ugu horreysay laga gartay Koonfur Afrika, iyo P1, nooc ka duwan oo markii ugu horreysay laga helay Japan laakiin ku wareegaya Brazil.
Previous articleHelitaanka tamarta la cusbooneysiin karo ee la-qabsiga cimilada Afrika: madaxa UN
Next articleSheegashada musuqmaasuqa ayaa dhalisay walaac cusub oo ku saabsan kaalmada la siiyo Koonfurta Suudaan